Cunno Kala duwan oo BSF Soo Saaraajinta Maggot • Yurie BSF
Nala Xiriir - Tababar Tababar Loogu Talagalay Waxbarashada Magaaloyinka BSF
About Us - Marka hore ee adduunka ee beerista ee Maggotot
Iibso oo Iibso Maggot
Su'aalaha Soogalootiga Maggot
Su'aalaha Carruurta Kalkaaliya
Iyada oon iibsan cunto
Maggot waa quudin kale oo kalluunka iyo digaaga.
Hubinta ganacsiga xoolahaaga ayaa sii kordhaya.
Iyadoo aan laguguma baahneeyn inaad iibsato qallalan
Ku soo biir Community Maggot adiga oo aan ku dhejin
Goobta Casriga BSF Maggot Ranch oo aan laheyn
Ma dooneysaa inaad ogaato meesha ugu dhow magaaladaada?
Sidee: Si otomaatig ah ayaa goobtaada lagu ogaado nidaamka waxaa lagu muujiyay tiro isku mid ah lambarrada boostada.
Sidaas kadib guji raadi.
Haddii aad rabto meel sax ah oo sax ah, fadlan buuxi nooca caamka ah ee magaalada / tuulada meesha aad hadda joogto.
Kadib guji SEARCH
Baaqa hadda, Call Yurie BSF
Khariidadaha liiska ku jira barnaamijka waa mid aan sax ahayn sababtoo ah xaddidaadaha tiknoolajiyadda ugu dambeysa.
Qeybaha tababarka fadlan kala xiriir Yurie BSF 0812-2105-2808
Qiimaha wax-soo-saarka ee Lacagta Qiimaha
Soo saarida dirxiga duugga ah ee dirxiga ah waa mid sahlan oo aan qaali ahayn, waxaan isticmaali karnaa qashin, qashin iyo digada.
Noocyada nafaqada dhamaystiran, amino acids iyo borotiinka sare ayaa si weyn u caawiya xayawaanka caafimaadka qaba koritaanka xayawaanka.
Haddii aan urin
WAQTIGA DHIBAATOOYINKA AH Lahaanshaha SMELL, Download free waa ammaan iyo raaxo. SAFE ma ahan banaanbaxyo beeleed waxayna ku xirantahay beeraleyda.
Baasaboorka casriga ah ee BSF oo aan lahayn Bau waxa ujeedkiisu yahay inuu soo saaro macmacaanka kalluunka iyo hilibka digaaga.
Horumarinta qoob-ka-soo-saarka saxda ah waa inay noqdaan kuwo aan qadhoon, oo aan lahayn mashiinka, iyada oo aan la isticmaalin daroogo iyo hana lahayn hargab, sidaas darteed natiijooyinka waa la kordhin karaa.
Badbaado sababtoo ah qoysku ma muujin, oo raaxo u leh inay fuliyaan.
Sii wad wax soo saarka maggaalada
Dalagyada loo yaqaan "Maggot" waa la baari karaa oo laga codsan karaa caleenta cagaaran, burooyinka caanaha iyo jilicsanaanta ama jilicsan (cusub)
Sidan ayaad ku heli kartaa xoolo badan oo aan dukaanka ka soo iibsan karin mar kale.
Nadiifi hilibka pellets iyo dukaanka cuntada.
Sii wad Codsiga Maggotiga
Suuq geynta Maggot? SELL TO YURIE BSF !!!
Uma baahnid inaad isku kalsoonaatid suuq-geynta suuqa.
Sababtoo ah Yurie BSF ayaa iibsan doonta.
Sii wadista suuq geynta Maggot
Yurie BSF wuxuu Rp100.000.000 ugu deeqay saaxiibkii ugu wanaagsanaa ee loogu talo galay horumarinta ganacsiga.
Lacagta kaalmada waxaa la siiyaa si loo kordhiyo awoodda wax soo saarka.
Bixinta Lacagta Bixinta MAGGOTO DHIBAATOOYINKA AAD NOQOTO - MAYA RIBA !!!
Sii wad Fursadaha Ganacsiga
WAXAAD U BAAHANTAHAY.
AMBASSADOR YURIE BSF waxay diyaar u tahay inay joogaan beertaada.
AMBASSADOR Yurie BSF waxay ku taallaa in ka badan magaalooyinka 100 si toos ah ugaga dhigo hanaan wax ku ool ah beerahooda.
Hubi 99 Location
YURIE BSF UNIVERSITY waxaa lagu siin doonaa tababar heer sare ah.
Si loo hubiyo in beeraha casriga ah ee BSF aan ur lahayn iyadoo la raacayo SOP (nidaamka hawlgalka caadiga ah) ee beerista BSF oo aan urin.
Jaamacadda Jaamic BSF ayaa sii waday
Sida saaxiibka Yurie BSF, waxaad si toos ah u noqoneysaa xubin ka mid ah KOPERASI MAGGOT INDONESIA.
Weelka rasmiga ah ee iibsashada iyo iibinta iyo horumarinta ganacsiga kale.
Waxaad ku raaxeysan doontaa faa'iidooyinka la wadaagayo macaashka haray ee ganacsiga iskaashatada reer Indonesia.
Sii wad shirkada Isgaadhsiinta ee Maggot
Noqo qayb ka mid ah bulshada Yuri BSF si wadajir ah u horumariso ganacsiga Maggot-ka ee adduunka ganacsiga agoraha.
Talaabadani waxay awood u leedahay inay la kulanto baahida suuqa ee gudaha iyo kan caalamiga ah.
Sii wad Agroindustry
Barnaamijkan CSR waxaa loogu talagalay kuwa raba in ay wax bartaan, laakiin ma awoodi karaan xirmooyin casri ah oo BSF ah oo aan urin
Sii wad CSR
Ku bilaw hawlaha maalmeedka oo leh salaadda qasabka ah si aad maalin walba ula dhaqanto Ilaah.
Marka barnaamijkan Yurie BSF waa MAIN iyo NUMBER ONE oo dhan barnaamijyada shaqada.
Sii wad salaadda
Hubi 99 Location Location of Maggot
Waa maxay sababta ay jiilaalka u jecel yihiin Yurie BSF
Barashada in lagu koro maggot la'aan iyadoon urin waa mid aad u fudud barnaamijka si guul leh loo baaray.
Hanuuninta la siiyay waxay ahayd runtii ilaa ay ku guulaysteen oo ay ka mid yihiin hannaanka beergooyska ee ganacsigayga
Sabirka Mft Yurie ee ah inuu i hago waa mid aan caadi ahayn, mashquul ah xafiiskuna maaha dhibaato sababtoo ah kormeeruhu waa bukaano dheeraad ah
Hubi 99 Location Maggot oo aan lahayn Bau Ranch
Iska ilaali lacagta si ay u iibsadaan pellets, 99% Beeralayda xayawaanka ah iyo qaar kale oo ka mid ah ganacsiyada maxaa yeelay ma awoodaan inay maalgeliyaan tiro badan oo quudin ah oo gaaraya 60-70%, haddii aad bilawday kharashka wax soo saarka, gaar ahaan quudinta xitaa waxay gaari kartaa 80%.
Beeralayda Daaqa ah?
Ku raaxayso keydinta kharashka digaaga digaaga ilaa 82%. Waxaad tan sameysaa adoo sameynaaya qudaarta digaaga adiguna leh maaddada cagaarka, sida burka maggot si markaa digaagaagu u kordho waa maximal. Waa waqtigii lagu badbaadin lahaa lacagta oo diiradda saarna sii wadida sii kordhinta tirada xoolahaaga
Baro meel kasta
Kaliya daawashada cajaladda fiidiyaha gacanta ah gaar ahaan beerashada BSF oo aan urin.
Sida loo soo rogo codsiga Yurie BSF ee Playstore.
Soo rog Codsiga
Sii socodsii sida loo hirgeliyo Maggot
Download Sida loo Hirgaliyo
Maggot for Feed Quudin
Si aad u hesho natiijooyinka ugu sarreeya ee BSF Maggot, ka hor inta aan lagu siin kalluunka iyo digaaga, waxaan kugula talineynaa in aad marka hore ka baartid:
Muuqaalada cusub / noolasha ah
Bur bur ah
Sida loo hirgeliyo Maggot for xayawaanka xayawaanka
Siyaabo Soodhawr ah oo Lagu Ogaanayo Inay Soo Saaraan Maggaalada Qodobada.
Xasilloon inaad weydiiso
Mid ka mid ah caqabadaha guusha ayaa ah ceebta ah in la weydiiyo, Yurie BSF wuxuu bixiyaa adeegga macaamiisha gaarka ah, si looga jawaabo wax ku saabsan ganacsiga maggajada iyo farsamooyinka farsamada ee maggot.
Isla markiiba wac
Qof kastaa wuu ogyahay dhirta. Cayayaankaasi waa kuwo nagu wareegsan. Waxay yimaadaan sababtoo ah waxay urayaan ilo cunto karsan. Marka laga reebo duqsiyaadka cidhiidhiga ah, waxay sidoo kale qaadaan cudurrada faafa sida qaaxada (tuberculosis), dysenteryamuba, daacuunka iyo cuduro kale oo kala duwan.
Faafinta cudurkan iyada oo loo marayo cunto cunno ay bini'aadanku ku dhaceen kadib markii ay ku dheceen duqsiyo. Laakiin dhab ahaantii duqsigu waxay sidoo kale keenaan faa'iidooyin badan oo bini aadam ah.
Diyuhu waa nooca cayayaanka (amarka subaxii amarka wareega ee loo yaqaan 'cyclorrapha diptera order'), duufaanta maskaxda ayaa leh anteeno gaaban, laba lammaane ah oo labada garab ah ah, kuwaas oo ah baalalka hore ee kaniisadaha iyo baalasha yaryar ee u adeega si ay u ilaaliyaan miisaanka marka la duulayo.
Dareeraha Dareeraha Duufaan
Waa maxay sababta duuduubka loo yaqaano cayayaan-faafidda cudurka? Sababtoo ah marka duqsigu dhulka ku jiro meel wasakh ah, ka dibna ku saabsan 125.000, jeermisyada ayaa laga tegi doonaa meesha ay degaan.
Tan waxay u dhacdaa si dabiici ah sababta oo ah habka gaarka ah ee cunida duqowga. Marka ay cuntada ku degaan, ka hor inta aysan bilaabin inay duqsiyada cunaan waxay sii deyn doonaan dheecaanka afkiisa.
Dheecaanku wuxuu u shaqeeyaa sida enzim oo kaa caawinaya fududaynta dheef-shiidka cuntada. Dareeraha matagani waxa uu ku jiraa cuntada oo haddii cunno ay bini'aadanku ku dhici karto cudurro kala duwan.
Waxyaabaha Muhiimka ah ee Daadka
Duufaanku waxay yimaadaan guriga sababtoo ah waxay urayaan ilaha cuntada. Si aad uga takhalusto, ku hay raashinka ku yaalla xashiishka aan duubi karin.
Si aad u hesho cunto, duqsigu way firfircoon yihiin inta lagu jiro maalinta. Diyaarad iyada oo ku xiran nooca waxay soo saari kartaa ukunta 75-126 iyo xargaha gudaha 1-4 maalmood.
Biologically, daqiiqada 5 ayaa jeexjeexi doona bayoolojiga, iyo haddii ay dadku cunaan, waxay keeni doonaan shuban iyo waxyaabo kale.
Saacadda nololeed ee duulimaadka way kala duwan tahay, inta u dhexeysa 5 ilaa 30 maalmood. BSF waxay udhaxeysaa si dhakhso ah hareeraha 5-8 maalin kasta halka ay cagaarka cagaaran ku noolaan karto 30 maalintii.
dukaanka guryuhu wuxuu u duuli karaa xawaare ku saabsan XNXX km saacadiiba, taasina waxay sababtay qashinka ama cuntada aan soo daynay dhowaan la duuli doono.
Gaar ahaan deegaannada halkaasoo kolonyada duulimaadka ay ku dhalaan bacrimin.
Faa'iidooyinka digaagga ee aadanaha
Maxaa loo isticmaalaa dhirta ay yihiin carruurtooda, badanaa loo yaqaanaa dirxiga ama maggot ama waxsoosaarid ama kufsi ama jajab ama jajab ama uget-uget iyo wixii la mid ah.
Dalalka qaarkood waddamo ay carruurtu u iibiyaan ayay u isticmaalaan dadka. Waxay bixiyaan cuntooyinka gaarka ah sida baakada, maraqa iyo pizza.
Dunida daawada, duurjoogta carruurta, yaan la yiraahdo maggaalada ama dirxiga ama cagaarshowga ama uget-uget, waxaa loo isticmaalaa sida daaweynta cudurrada dibadda ee loo yaqaan "therapy therapy".
Meesha laga yaabo in dirxiga la dhigo agagaarka boogta si uu u cuno maqaarka iyo hilibka boogaha boogaha leh ee ku dhaco, dilaan bakteeriya oo cunaan maqaarka dhintay. U fududeynta daawada si loo daboolo boogaha.
Magotool waxaa kaloo inta badan booliisku isticmaalaan si loo ogaado da'da meydka ee kiisaska dilalka kala duwan.
Faa'iido kale waxa weeye in maaddada 'genile refilin' ay inta badan isticmaasho shirkadaha sida adhesives. Awoodeeda iyo dabacsanaanta waxay ka xoog badan tahay kuwa ka samaysan soodhaha geedka.
Hodanka refilin-ka ayaa sidoo kale daweyn kara cudurrada kala duwan ee dareemaha xididdada iyo meheradda. Halka labada xididoodba ay inta badan xannibaan socodka dhiigga iyo oksijiinka maskaxda.
Marka laga soo tago dhulluubyada iyo bakteeriyada, magangalyo-doonka waxa kale oo ku jira qashinka qashinka ah ee oragnik, qashinka guryaha, qashinka warshadaha, qashinka bini'aadamka, digada xoolaha, bakhaarada iyo walxo kale oo dabiici ah.
Faa'iido kale oo dad badani ku qaataan Indonesia waxay diraan dirxigaas iyagoo u adeegaya quudinta dabiiciga ah iyo kaluunka kale ee kalluunka iyo digaaga.
Maggot shaqo la '
Guud ahaan qallajinta ayaa waxaa marka hore laga baaraandegaa baastada maggotiga ah, kalluunka maggotoonta, burka maggot, macmacaanka cusub, maqaarka Chrispy, macmacaanka qallalan, saqafka jilicsan, barxadda barafaysan, foornada qamriga iyo wixii la mid ah.
Diyaargarawyadan soo socda ayaa si toos ah loogu siiyaa xoolaha ama lagu kaydiyaa sahayda kalluunka, digaaga iyo raashinka digaaga.
Isticmaalka macmuudka ee xayawaanka xoolaha ee dabiiciga ah iyo tan kale ee loogu talagalay sababtoo ah maggotku waa hodan nafaqo leh, dhamaystirnaa asiidhyada amino iyo sare ee protein. Cudurka borotiinku wuxuu ka kooban yahay 40-56%.
Habdhaqanka iyo Biyolojiga
Noocyada jireed ee kala duwan ee duqsiyada. Qaar ka mid ah waa mid hooseeya, dufan, weyn iyo mid yar oo ku xiran noocooda.
Guud ahaan waxay leeyihiin awood wanaagsan oo ay ku qabsadaan dhaqdhaqaaqa hawada.
Madaxa duullimadu wuxuu ka kooban yahay indho adag oo ku yaal dhinaca dhinacyada iyo xuquuqda madaxa, antennae, ocelli, afka. Indhaha ayaa si wadajir ah ula socon kara madaxa.
Daxdu waxay leeyihiin dareemooyin u nugul dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale qalab si loo xakameeyo jihada aragtida aragtida ku saabsan dhaqdhaqaaqa.
Sidaa darteed waa inay xasaasi u tahay in ay fuliso dhaqdhaqaaqa duulimaadka ah, oo soo jeestaan ​​isla markaana u roga isla markiiba si ay u aqoonsadaan qaabka sheyga.Mid ka mid ah noocyada duulimaadka ayaa leh ilko.
Maxaa la cunay adhigu waa miro yar (minni) iyo cunto dareere ah. Sida cunnooyinka adag ma cunaan.
Hase yeeshee, noocyada dabiiciga ah ee saliida leh waxay leeyihiin mindi afkooda si ay u sameeyaan jeexitaan iskutallaab ah oo ay nuugaan dhiigooda.
Hawlaha ayaa ah inay qabtaan baalashyada oo ay yeeshaan muruqyada duulimaadka qaybta labaad Qaybaha hal iyo seddexaad way ka yar yihiin. Qaybta sadexaad ee qulqulka wuxuu leeyahay xarriijimo marka loo duulayo.
Marka laysku daro ama lakabin karo wejigooda wajiga, isla markaana booska duulimaadka labka ah wuxuu ka sarreeyaa jirka haweenka.
Muddo dheer ka dib markii booska ka mid ah dameerka dib u jeestay. Dumarka uurka leh ee haweenka uurka leh waxay raadinayaan meel u dhow ama ka sareeya cuntada si loo dhigo ukunta.
Marka laga reebo nooca BSF duulis (Hermetia illucien) oo dhigta ukunta ukunta oo aan ka sarreyn cuntada toos ah laakiin agagaarka cuntada.
Goobta guud ee loo raadsado waa in ay leedahay ilo badan oo cunto ah sida cunnida cufan ee dirxiga.
Ukunta qallalan waxay guud ahaan xayiraan saacadaha ayagoo wax yar ka duwan duullaanka BSF ee u baahan maalmo 2-4 ilaa ay ukumaha dillaacaan.
Dufanka miraha (noocyada dhoobada)
Hilibka Hilibka (sarcophagidae)
Dareemaha cagaaran (calliphora vomitoria)
Dabeecad (Horse Flies)
Daadadka Qashinka (psychodidae)
Daadka Sanduuqa (Lululata Spiriverpa)
Daaqadaha guriga ku saleysan (musca domestica)
Duufaanta BSF (Hermitia illucien)
Duufaanta miraha waa cayayaan beeraleyda sababtoo ah waxay u duulaan miro. Duuladani waa mid aad u fudud in la jiido sababtoo ah cunto badan ayaa laga helaa beerashada waxaana lagu taageeraa cimilada indhaha ee Indonesia ee iyaga loogu talagalay.
Xilliga roobka ayaa duqsiyadani ay aad u badan yihiin.
Astaamaha Dareemaha Miraha
3 mm dhererka duulimaadka
Midabka jidhku waa mid huruud ah ama midab leh
Indhuhu waa indho cadcad
Hayso calool xarkeed markaad si tartiib ah u socoto
Waxay u egtahay in ay ku faani karto
Ukunta waxay u egtahay bilo bare
Ukumaha waxaa lagu meeleeyaa kooxo maqaarka hoostiisa ah ama boogaha cilladeysan ama miro
Tirada ukunta waxay ku saabsan tahay 15 ee hadhuudhka
Ukumaha ayaa laba maalmood ka dib la qabadsiiyaa
5 mm dherer dherer ah
Caloolgu wuxuu leeyahay xariiqda xarafka 3
Dumarka haweenku waa mid aad u badan
Nin caloosha ayaa ka badan
Miisaanka nolosha ayaa soconaya maalmaha 16.
Dirxiga nool ee miro u dhexeeya 6-9 maalmood
Maalmo miraha 7-30
Isku duubka qaangaarka ah waxay ku nool yihiin toddobaadka 2-9
Hal duullimadani way ka duwan tahay tan kale marka la barbardhigo kuwa kale. Duufaanta hilibka waa ovoviviparous, taas oo ah, waxa ay saaraan boogaha, wasakhda, baqtigooda, burburinta xaalada organic iwm.
Calaamadaha Hilibka Hilibka
Daxda hilibka dhedigga ah waa laydh
Dhererka 6-14 mm duulimaadka duulimaadka
Miyuu jiraa laabta laabta cagaaran
Waxay leedahay xarumo madow oo 3 ku sii fidaya qulqulka dharka
Hayso calool cagaaran iftiin
Hilibka Qulqulka Lafaha nolosha
14-30 maalmaha duulimaadka
Markasta marxaladda ugu horreysa waxay ku dhalataa miraha 40-80
Waxaa jira noocyo badan oo duqoobo cagaaran, guud ahaan dhexdhexaad ah iyo weynba. Waxaa jira calool-madow, buluug cad, cagaar iyo cawl.
Qashinka kala duwan ee hilibka kalluunka ah ama hilibka qashinka ah ama xayawaanka xayawaanka ah ama qashin qashinka cuntada.
Duufaannada cagaaran waxay leeyihiin awood aan caadi ahayn, waxay u baahan yihiin kaliya hal ilbiriqsi si ay bakteeriyada iyo jeermiska u dhigaan cuntada ay qabteen.
Astaamaha Cagaarka Cagaaran
Dhererka cagaarka cagaaran ee weyn "1 / 4" -1 / 12 "inch
Caloosh-casaan, madow, cagaar iyo cawl
3 / 4 Dhererka waaweyn ee dirxiga
Maalmo miraha 7-12
Ukunta cagaaran ee cagaaran waxay xireysaa saacadaha 8-18
Ku noolaanshaha hilibka qashinka ah ama hilibka kalluunka, ama digada xoolaha, ama qashinka cuntada. Dumarka aan la joojin ayaa duulaya haweenka taasoo sabab u ah korodhka miisaanka xoolaha. Qaniinyada ayaa aad u xanuun badan.
Dhererka duulimaadka weyn ee weyn waa 25mm
Madow mugdi ah
Indhahiisu waa cagaar ama madow
Indhaha indhuhu waa isku mid yihiin
Indhaha haweenka haweenku way kala fog yihiin
Marka aad ukumo ukumo badan sida 100-1.000
Goobaha duubista ugxantu waxay u dhexeysaa maalmaha 5-7
Nolosha nolosha ee duqsiyo farabadan oo udhaxeeya waxay u dhexeysaa maalmaha 30-60
Qoryaha qashinka ama duqsiyada qashinka ama duqsigu. Dhalada wuxuu jecel yahay qashinka dabiiciga ah sida dhoobada.
Astaamaha Daadka Qashinka
2 mm Dhererka qulqulka
Cawl guduud ah
Baalasha oo buuxa timaha
Ukumaha ayaa xajin doona 1-6 maalintii
Maalmo miraha 10-50
1-3 Maalinta wajiga ardayga
Waxaa jira laba Nooc oo Isudax Sand;
Duulimadani waa halis maxaa yeelay waxay qaniinaysaa xayawaanka iyo bini-aadanka oo keeni kara cuncun iyo cuduro kala duwan. Sida qandho badan.
Dhaqankooda ku hareeraysan xeebta, kaymaha mangrove, kaymaha iyo beeraha Buffaalkani waa firfircooni habeenkii inta u dhaxaysa saacadaha subaxda 9-4.
Qaniinyada Nidaamka Cagta
Phlebotomus (viegsmenia parasite vector)
Lutzomiya (viegsmenia parasite vector)
Astaamaha Daadka Sand
Jidhkiisu waa mid qarsoon
Gariig oo huruud ah
Labo indhood oo madow ah
Sii dheer lugaha
Marka aad aamusantahay ama nasashada baalashadu had iyo jeer way furan yihiin
Jidhka iyo garbaha ayaa ku jira dabool quruxsan
Awooda duulimaadka sare ee ilaa shan mitir
Si loo soo saaro ukunta, duqsaha haweenka waxay u baahan yihiin dhiig ka soo jiidashada iyo duufaanka
Markaad dhigto ukunta madow ee 30-50
Dareemaha dadka waaweyn waa dhererka 10-11mm
Lugaha madow ee madow.
Sanduuqa Qalabka Cilmiga ah
Ku noolaan kartaa ilaa sanadka 2
Pupa ama qiyaasta qoorta ee toddobaadka 1-2
Daaqadaha guriga (musca domestica)
Noocyada duullimaadka guryaha waa duqsiyada ay ku badan yihiin nagu wareegsan waxayna yihiin kuwo xakameynaya cudur. Isku duubka dhismaha dumarka sida caadiga ah waxay wada siman yihiin hal mar.
Waxay ukumo ku hareeraan ukumaha 100 iyaga oo ka gooyey walxaha dabiiciga ah sida waraaqaha cuntada, boogaha, ama saxarada.
Tilmaamaha Aqalka Aqalka
Dhererka qaangaadhka qaangaarka ee qaangaarka ah waa inta u dhaxeysa 5-8 mm
Hayso khadad dherer ah 4
Miyuu jiraa laabta laabta laabta
Wuxuu leeyahay calool huruud ah
Wejigiisa ayaa lagu daboolay timo ganaax ah oo u adeegtay inay dhadhamiso xubnaha
Haysashada indho adag oo adag
Indhihiisu waxay leeyihiin kumanaan lenses oo u oggolaanaya aragti ballaaran
Afar dhinac oo xididdada garabka ah ayaa si fiican loo xiraa oo aan toos ahayn
Cuntadu waa caddaan
Nooca jidhka ayaa loo jaraa caarada madaxa
Hayso qalabka dabka qaboojiyaha 2
Dhalada ayaan la jarin
Dhererka qashinka waxaa la gaarsiiyaa 12 mm sida qof weyn
BSF duulis ama duulis ciidan madow ama duullimaad madow oo madow ayaa leh jidh u dhaxeeya 15-16 mm iyo madow.
Askariga madow waxay u duulaan cimilada iyo cimilo-dhaqameedka. Jiritaanka jawiga deegaanka oo koraya dhirta ubax badan, halkaas oo ay cunaan nuugista nuxurka macaanka ubaxa ama subaxdii subaxda.
Marar dhif ah ayaa lagu arkaa guryaha sababtoo ah duqsiyadani ma cunaan. In badan ayaa lagu arkaa meel ay ku jiraan qashin badan, qashin iyo wasakh si loo dhigo ukunta. Isla markiiba haweeney qaangaar ah ayaa ukumi kartaa ukunta 185 - 1.235.
Aad u fiican: Stratiomyoidea
Noocyada: Hermetia illucens
Magaca Dambe: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)
Tilmaanta BSF Flies
Duufka qaangaarka ee BSF waa qiyaastii 16 mm (5 / 8 inji). Diyaargarowga dhexdhexaadinta dhexdhexaadku wuxuu leeyahay jirka oo badiyaa madow.
Iyada oo midabada ay ka mid yihiin madow, buluug ilaa cagaarka cagaaran iyo mararka qaarkood oo leh caarada caloosha guduudan. Taabitirka caloosha ee labaad (caloosha) wuxuu leeyahay shabaqa nadiifsan.
Iyada oo qaab muuqaalkiisu badan yahay iyo indho aad u ballaadhan. Miyuu leeyahay anteeno labo jeer dhererka madaxa. Ku samee lugaha madow ee 6 leh tarsi whitish ah.
Gargaarka BSF wuxuu u eg yahay xaji. Oo markaad nasato, baalashadu waxay ku daboolan yihiin horjoogsiga caloosha. Diyaarad Sare Black ah waa duulimaad.
Marka la eego marka la eego cabbirka, midabka, iyo muuqaalka oo la mid ah cirbadaha iyo wixii la mid ah. Gaar ahaan sababtoo ah anteenada duulimaadka ah ayaa u egtahay midab.
Tarsi ayaa soo laabtay duullimaadka cirridka waxana uu leeyahay laba daaqado "daaqado" ah oo ku yaal qeybta hoose ee caloosha.
Maxaa ka dhigaya duulimadu inay u egtahay "caaro dhexda" cidhiidhi ah. Dirxiga madow ee mugdiga ah ma aha mid la mid ah duqsiyada guriga iyo duqowga cagaaran.
Faa'iidooyinka Soldier Black Fly
Waxaa ugu weyn ee ka faa'iideysanaya duulimaadka dhabarka dambe waa carruurtooda ama dirxiga ama qoob-ka-ciyaarka ama uget ama lakab ama jejin.
Kuwaas oo markii dambe laga helay dawooyinka, bilayska, makhaayadda, makhaayadaha iyo kalluumeysatada kalluunka beeraha beeraleyda ah ayaa la helay iyadoo loo eegayo beerahooda.
22 Sababaha BSF Saaxiibada Dadka
1. Badbaadinta Dadka
Askariga madow Fly ma aha mid halis ah oo ammaan ah bani-aadamka. BSF aan baxsanayn waxay u egtahay duqsiyada guriga iyo duqowga cagaaran.
Dadka waaweyn ee BSF waxay leeyihiin af laakiin waxa loo isticmaali karaa oo keliya in la cabbo si aaney u noqonin xuddunta cudurka dadka. Dareecada BSF ma qaniinaan ama xoqin taasoo ka dhigaysa inay badbaado u tahay bini-aadanka.
Inta lagu jiro noloshiisa BSF ma aysan cunin, si ay u ilaaliyaan noloshooda waxay cabbeen khamri caano iyo subaxdii subaxdii.
Tani waa waxa BSF ka dhigaya mid badbaado u leh bani-aadamka. Taasina waa sababta aan u dhigno BSF in ay guriga ku dhifto.
BSF ma keenayso Cudurrada
Daanyowga soo galaya iyo kuwa soo socda ayaa ah caleemaha cagaaran iyo duqoobidda guriga khatarta ah maxaa yeelay waxay u yimaadaan inay raadiyaan cunto iyo faafiyaan cudurrada faafa.
Dirxiga dadka waaweyn iyo BSF kuma jiraan qeybta cayayaanka ama khadadka. Marka la barbardhigo, ciidamada madow waxay u duulaan dirxiga iyagoo door ka qaata sida guntii cas.
Tusaale ahaan sida qashinka qashinka, qashinka iyo digada oo burburin kara dusha jirka iyo dib u soo celinta nafaqooyinka carrada.
BSF Larvae waa ilaha la cusbooneysiin karo oo la cusbooneysiin karo
Askariga madow duulaya (BSF) waa isha oo ah borotiinka waara (dib loo cusboonaysiin karo) oo ah mid aad u fiican dhaqanka aqua, xayawaanka, xoolaha iyo nafaqada dadka.
Qaaxada waxay leedahay cunto aad u ballaadhan oo u isticmaali kara laba jeer miisaanka substrate hal maalin.
Dareeraha waxaa kaloo loo isticmaali karaa qashinka guryaha, qashinka qashinka, qashinka makhaayadaha ee qashinka.
Waxyaabaha ay ka mid yihiin khudradda iyo miraha, alaabta beeraha iyo qashinka xoolaha oo ay ku jiraan digada xoolaha iyo qashinka bini'aadamka.
2. Afka BSF "Maqnaansho"
Si ka duwan duqsiyada guriga, BSF waxay leedahay qayb ka mid ah "aan dhammaystirneen" afka oo aan wax cunin waxaana kaliya isticmaali kartaa cabitaanada sida nectar ubax ama biyo qoyan.
Sababtoo ah ma cuno BSF ma aha inay ku dhacdo cunto iyo weelasha dheef-shiid kiimikaad kale sida duqsiyo kale, sidaa daraadeed ma faafo cudurka.
Askarta duulimaadka madow ma xiiseynayaan inay yimaadaan guryaha ama cuntada bini'aadamka. Iyadoo la ogaanayo nacasta iyo dhirbaaxada, haweenada qaadashada ukumaha ayaa aad u xiiseynaya cuntada ama bacriminta.
Duulimaadka madaw ee duulimaadka ah ma duulo inta badan duqsiyo kale. Diyaarad askari oo madow ah ayaa leh tamar yar sababtoo ah awooddooda xadidan ee ay ku cunaan cuntada sida dadka waaweyn.
Diyaarad askari madow ayaa si sahlan loo qabsadaa oo u dhaqaaqaa marka ay soo galaan guriga, sababtoo ah kama fogaan markii la qabtay.
Askari madow ayaa duulaya nadaafad (nadiif ah) oo aan qaniineynin ama dhicin. Dareenka keliya ee difaaca ee ka dhanka ah geela waa inuu duulo oo qariyaa.
Si loo yareeyo askarta madow ee duulimaadka dadweynaha waxaa la sameyn karaa iyada oo la gooyo ardayga ka hor inta aysan u duulin.
Qaab kale ayaa loo xakameynayaa, qallajin karaa, gacanta ku hayaa xayawaanka rabaayada ah, weel qashin ah oo loogu talagalay qashinka digaaga ee quudinta si toos ah, ama shimbiraha digaaga.
4. Sakti BSF duuli
Codka laga sameeyay BSF ayaa sidoo kale iska caabin kara noocyada kale ee duqsiyada. Iyo haddii ay jiraan duqsiyo farabadan iyo bsf badan oo ka mid ah aagga markaa ma jiri doonaan duqsiyo iyo jumlado kale oo isku dayaya inay xajiyaan.
5. Wakiil Qalabaynta Qashinka Dabiiciga ah
Maalin maalmaha ka mid ah macdanta BSF ayaa labadii jeerba u isticmaali karta qashinka organic, qashinka ama qashinka xoolaha.
Tani waxay ka dhigan tahay haddii aan leenahay 100 kg bauxfs, ka dibna 200 K oo qashin ah ayaa maalin kasta baxaya. Qashinka la burburin karo waa dhammaan qashinka organic, qashinka, digada xoolaha, iyo qashinka dadka.
Tusaalooyinka Qodobada Cunnooyinka Daawooyinka Maggot
Qashinka suuqyada (khudaarta iyo miraha)
Tusaalooyinka Qashinka Cuntada ee Maggot
Qoryaha saliidda ee Palm
Keega saliida ee saliidda
Tusaalooyinka Qodobka Cunnaanta Cunnadiisa Cuntada
Cuncun digada bakayle
6. Nadiifi adigoon urin
Sida caadiga ah lo'da lo'da guud waxay keeni kartaa ur. Si ka duwan sida wasaqda loo sii daayo boogaha bsf ma keeno wax ur ah.
Xajmiga Maggot waa miro yar oo la mid ah sida ciid ama qiyaasta malawadka.
7. Waxay ku noolaan kartaa Xaqiijiye
Dirxiga BSf waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay mid aad u madax adag oo awood u leh inuu ku noolaado xagjirnimada. Sida laba saacadood oo khamri ah oo cad, cusbo, asiidh iyo ammonia.
Heerkulka qabowga ama haddii aysan jirin cunto Baanteyn BSF ayaa u geli doona hibernate, ha ahaato mid hurdiga ah oo hurdiga ah oo dib u bilaabi doona marka heerkulka hawadu ku noqoto mid caadi ah.
8. Rich ee Nafaqada iyo Protein sare
Cudurka BSF wuxuu ka kooban yahay 40-56% protein ah, 30-36% soo saaraha, 15-16% ash, 4.9-5.2% calcium, iyo 0.61-0.64% fosfooraska qaabka qalalan.
Dhirta BSf waa mid hodan ku ah nafaqooyinka, dhamaystiran ee ku jira amino acid iyo sare ee borotiinka sidaa daraadeed waa mid aad u wanaagsan in la siiyo sida xayawaanka xoolaha.
Tusaalooyinka Xayawaanka Nafaqada
Dhammaan noocyada kalluunka
Dhammaan noocyada digaaga
Dhammaan noocyada shimbiraha
Dhammaan noocyada ducks
9. Dadweynaha BSF ee dabiiciga ah
Isku celceliska da'da BSF waa qiyaastii 5-8 maalintiiba waxayna xitaa gaari kartaa 14 maalin. Inta lagu jiro marxaladda nololeed ee duqsiyada maanta ay soo saari karaan mate ama mate.
Ka dib markii laysku daro ama la guursado askari madi ah ayaa duulaya saacadaha ay u dhimanayso. Halka askariga madow duqeeya haweenku ay dhiman doonaan kadib markii ay ukuntooda ukeenayaan.
10. Horumarinta Larval Dhaqso ah
By bixinta feed ee foomka qashinka, isdhex galka ama qashinka, dirxiga yar yar oo haya oo kaliya si ay u gaaraan marxalad dadka waaweyn celcelis ahaan 18 maalintii.
Inta u dhaxaysa wakhtiga toddobaadkii labaad jirka weyn ee instar ayaa koraaya kuna kori doona 15.000 ee cabbirka.
Kobaca dhaqaalahan ugu dhakhsaha badan ee digirta ayaa keena faa'iidooyin loogu talagalay kuwa beerto, kuwaas oo la goyn karo oo la siin karaa xoolaha laba toddobaad kaliya.
Saaxiibo badani waxay bixiyaan dharkooda marka ay da'doodu tahay laba isbuuc sababtoo ah maadada dirxigaani maaha mid adag oo aad u jecel kalluunka, digaaga iyo xamaaradaha.
11. Dad badan oo ukun ah
Dumarka BSF waxay dhigi karaan ukun u dhaxeeya ukunta 185 - 1.230. Ukunkan waxaa si toos ah loogu dhejiyaa cuntada ama qashinka dusheeda, laakiin kor u kaca cuntada.
Tirada ukunku waxay u dhigantaa heerka cabbirka jirka weyn ee BSF. Dumarka BSF ee leh baaxad weyn oo ballaaran iyo garab ballaadhan ayaa leh jimicsi sare oo ukunta la barbardhigo duqsiyada leh meydad yar iyo baalasheeda.
Laba maalmood ilaa afar maalmood kalluunkaasi wuxuu kudhici doonaa 1 Macdanta Xajka ah waxayna u koraan inay 6 u dhexeeyaan inta u dhexeysa laba ilaa saddex toddobaad.
Xaaladaha haddii ay jirto heerkulka cuntada iyo heerkulka ku filan inta u dhaxaysa 25-35 ° C. Cabbirka barafka cusub ee barafku wuxuu ku saabsan yahay 2 mm, ka dibna wuxuu ku koraa 5 mm. iyo ka dib markii uu ka beddelay maqaarka wuxuu u koraa 1,5-2 cm.
Maggot BSF waxay cuni kartaa wax kasta oo ay cunaan bini'aadamka, waxayna si dhaqso ah u burburin karaan qashinka, qashinka iyo cuntada.
Faa'iidadaasi waxay Maggot BSF soo saartaa dad badan oo adduunka ah. Faa'iido kale ayaa ah isha cuntada iyo warbaahinta aad u fara badan ee jawigeena ah waxaana laga heli karaa bilaash.
Fududeynta helitaanka ilka dhirta ilmagaleenka waa dabcan beeralayda hormariya waxaa lagu soo saari karaa qiimo yar.
13. Looma baahna dhul ballaaran.
Waxyaabaha loo yaqaan "maggot" oo si khaas ah loo cuno sida kalluunka iyo hilibka digaaga ayaan u baahnayn dhul ballaadhan. Waxaan isticmaali karnaa baabuurta la dhigto, dhinac iyo gadaasha guriga oo leh cabbirka bilowga ah ee mitirka 3x4.
Xitaa haddii aad horay ugu fiicneysid qoob-ka-soo-saarka BSF-ga casriga ah, waxaad ku kobcin kartaa guriga sida saaxiibka Yurie BSF ee magaalada Kebumen.
Beeralayda kalluunka, digaaga iyo bakhaarka xayawaanka ee bsf waxaa loo isticmaalaa sidii xayawaanka xoolaha, waxaana guud ahaan loo baaraandegaa maaddooyinka quudinta.
Tusaale ah Maggots
14. Si fudud oo waxtar leh
Si loo soo saaro magdhow BSF waa mid aad u sahlan, oo ku filan in lagu bixiyo qashinka ama qashinka organic ee weelka oo ku rid aag aan toos u soo gaadhin roobka.
Maalmo gudahood Bakhaarada BSF waa la goostay oo la siin karaa xoolaha. Habka mooska waa mid aad u macquul ah.
Sababtoo ah BSF Maggots sida qof weyn ayaa si dabiici ah uga baxaya warbaahinta qashinka si ay u aadaan meel mugdi ah oo qallalan (is-goosashada) si ay u fekeraan una bedelaan wajiga ardayga ka hor inta aysan ugu dambeyn ugu duulin BSF duqeyn weyn.
15. Ilaha siyaalaha lagu cusbooneysiin karo
Fahamka guud ee maggot waa ili ah borotiinka si dhakhso ah loogu soo celin karo si dabiici ah.
Wax soo saarka dhoobada ama qoob-ka-soo-saarka ayaa ah hab lagu soo saaro borotiinka la cusbooneysiin karo oo ah natiijada geedi-socodka joogtada ah ee waxsoosaarka.
Taas macnaheedu waxa weeye in BSF BSF iyo Maggot duufaanku ay ku jiraan dabiiciga waqti dheer sidaa daraadeed uma baahna in lagu jahwareeriyo oo laga walwalo sidii looga baxsan lahaa ilaha.
Taasina waa sababta ay beeralayda caanjugta ah u soo jiidanayaan inay soo saaraan borotiinka ilaha borotiinka ee kalluunka iyo digaaga.
16. Calorie Dheer
Maggot wuxuu leeyahay kaloori sarreeya ama ilo tamar ah oo markii ay cunaan xooluhu kalluunka ama digaaga ayaa si dhaqso ah u kora.
Sababtoo ah waxqabadka xoolaha waxaa taageeraya kalooriyada la cuno ee laga soo qaado BSF. Kaliya sheeg, kalooriyadu waa tamar loo baahan yahay jidhka kalluunka, digaaga iyo xamaamka iyo sidoo kale aadanaha.
Si aad awood ugu yeelatid inaad u guurto oo aad u fuliso hawlaha jidhka si habboon si jidhku u leeyahay diidmo ku filan weerarada cudurka.
Tusaale ahaan, baahida kalooriga ah ee xayawaanku guud ahaan sida 9,2 - 10,1% dufan si loo daboolo baahiyahan waxaa laga heli karaa BSF Maggot.
Maggot oo ku jira walxaha baruurta 29,65 (Fahmi et el, 2007). Laakiin marka laga eego dhinaca da'da, maggot wuxuu leeyahay% qaybo nafaqo oo kala duwan.
Maalinta Qalabka Qallalan (BK) Protein Coarse Protein (PK) Coarse Coarse Ash
Fiiri marka hore
Marka la eego walxaha baruurta ee maggotka oo aad uga sarreeya baahida kalluunka (xoolaha kale fadlan iska hubi in aysan ahayn wax xad-dhaaf ah ee quudinta).
Kadibna way ka fiicnaan lahayd haddii loo yaqaan "BSF Maggot" oo loo isticmaalo sida baastada, burka, jilicsanaanta iyo wixii la mid ah.
Hagaajinta buqashooyinkan u diyaargaroobyo kala duwan marka laga reebo in laga fogaado nafaqooyinka dheeraadka ah ee aan kufar lahayn oo ay saameyn xun ku yeelan karaan xoolaha. Sidoo kale waa qashin.
17. Bixinta Fursadaha Ganacsiga
Wax soo saarka raashinka xayawaanka laga soo bilaabo sannad-illaa sanadka ayaa koray 6,2% -8,1% waxsoosaarka xayawaanka ee 2018 ayaa lagu xiray 19,4 million tons oo cunto ah.
Xaddiga badan ee baahida xayawaanka ee xayawaanka ayaa ka dhigaysa wax soo saarka cagaarshowga fursad wayn.
Faa'iidada loogu talogalay caleenta cagaaran waa in ay yihiin kuwo aad u jaban oo bilaash ah, xitaa marka la eego gaadiidka, waxay sidoo kale aad u yaryihiin.
Marka la barbardhigo xayawaanka cuntada, maaddooyinka aasaasiga ah waxaa lagu soo dhoofiyaa buruun iyo qiimaha sare ee keenista qalabkaas.
Barashada Aan Laheyn
Laga soo bilaabo dhinacyo kala duwan, beeralayda maggot waxay ku guulaysan karaan, laakiin dabcan si ay u siiyaan quudinta xoolaha raqiis ah oo tayada leh, waxay u baahan yihiin inay bartaan sida loo soo saaro qoyaanka saxda ah si ay u soo saarto wax badan oo khudradda ah.
Oo waxay u baahan tahay in la fahmo laga bilaabo bilowga, laga bilaabo beerista maggot oo aan urin. Si ganacsiga xoolahaaga ee Maggot uu noqdo mid ammaan ah oo raaxo leh in aan bulshada lagu jibin.
Bilowga waxaanu gali karnaa fursaddan marka la eego cabirka yar yar ama guriga.
Kordhinta aqoonta iyo waayo-aragnimada dhab ahaantii waxay ina dhigaysaa kalsooni si loo horumariyo ganacsiga si wayn.
18. Cimilada Aasaasiga ah ee Indonesia
Cimilada kulul iyo
Iyada oo cimilada kulaylaha ee Indonesia, BSF (duulis ciidda madow) ayaa duuli kara oo si wanaagsan u noolaan kara.
Faa'iidada of cimilada kulaylaha this waa in ay ka dhigaysaa dhammaan hababka of Magfot BSF casriga ah oo aan urin noqdaan:
Horumarinta casriga casriga ah ee BSF oo aan lahayn urta raqiis
Qalabka beeraha ee BSF casri ah adigoon urin urin
Horumarinta casriga ee Maggot BSF oo aan urin waa faa'iido badan
Cagaarka bsf casri ah oo aan urin natiijooyin dhakhso badan
Kobcinayaan Maggawo aan lahayn Cunto Cheaper
Cimilada kuleylka ee Indonesia waxay ka caawisaa beeraleyda in ay yareeyaan culeyska wax soo saarka.
Marka la barbardhigo dalalka kale ee leh laba xilli oo keliya. Si aad u sameysid duufaan BSF waxay qaadataa boqollaal malaayiin oo lacag ah oo leh dhammaan qaababka iyo nalka si ay heerkulka durbadiiba u xasillaan.
Halkaas oo Indonesia lagama maarmaan maaha sababtoo ah cimilada Indonesia waa mid deggan. Haddaba si aad u samayso dabo la barbar dhigo 11-2, uma baahnid inaad qarashgareyso boqolaal malyan oo lacag ah.
In Indonesia si loo sameeyo boombalooyinka BSF ku filan oo leh Rp500.000-Rp600.000 lacag.
Si fudud u beerashada Maggot "Qodax"
Si loo soo saaro maggot, mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay in la diyaariyo waa khayraadka dabiiciga ah sida maaddooyinka asaasiga ah ee loo sameeyo maggot.
Sida qashinka organic, qashinka, digada xoolaha iwm. Dhammaan maaddooyinka aasaasiga ah waa kuwo aad u fudud in la helo. Waa sahlan tahay helitaanka alaabta aasaasiga ah si aad Maggot uga dhigto faa'iido dheeraad ah si aad u bilowdo ganacsi fudud.
Waxyaabahaas maaddooyinkaas hadda waa la helaa oo nagu wareegsan. Kaliya fiiri qashinka qashinka ee suuqyada, waddooyinka iyo goobaha qashin-qubka.
Ma aha in la sheego qashinka qashinka, saliidda timirta ah oo la tuuro milkiilaha. Iyaga oo ay ku jiraan qashinka xayawaanka ah ee la kala firdhiyey oo ay dhibsanayaan bey'adda ku xeeran.
Iyada oo la helayo alaabta mishiinka, sameynta ganacsiga maggajada si sahlan loo fuliyo.
Kobcinta Maggawo-yare aan dabiici ahayn waa faa'iido badan
Kharashka hooseeya ee maalgashiga hore iyo fududaynta helitaanka algotta wax soo saarka ayaa ka dhigaya ganacsiga maggajo faa'iido leh.
Sababtoo ah raasamaal yar oo keli ah ayaa bilaabi kara iyo helitaanka alaabta ceeriin ah oo sahlan in la sameeyo waxay sameyn kartaa kharashka wax soo saarka iyo sii socodka ganacsiga oo faa'iido badan leh.
Natiijada Natiijada Horumarinta Qoysaska Korrinka Kiciska ah
Kobaca BSF-ga ee cimilada kulaalayaasha kulaylka waa mid aad u dhakhso badan marka loo eego wadamada aan qaxoontiga ahayn.
Maggot BSf ee cimilada kulaylaha waxaa lagu goyn karaa kaliya 18 oo keliya maalintii. Iyo sidoo kale BSF maggots ayaa sidoo kale la goyn karaa marka ay hal toddobaad kaliya ah.
Waqtiga gaaban ee soo saarista qiiqa ee cimilada kulaylaha ayaa aad u caawin kara beeralayda si degdeg ah oo raqiis ah.
Sidaas darteed baahida quudinta xayawaanka ayaa noqoto mid la heli karo.
19. Qaadashada Awoodda Halka Meel kasta
Si loo soo saaro maggot, waxaa jira qalab iyo qalab badan oo ay tahay in la bixiyo sida dab damiska BSF, weelka ukunta BSF, ukunta ukunta, ballaarinta qanjirada biotong biotong
Samaynta bambooyin BSF uma baahna inay isticmaalaan waxyaabo cusub, Waxaad ka samayn kartaa boombalooyinka BSF-ka qashinka ama qalabka aan la isticmaalin sida qoriga loo isticmaalo, birta qashinka ah iyo bamboo guriga dhexdiisa.
Baqsiyada BSF waxaa loo sameeyaa sida goob lagu beero si ay u duulaan si aanay u duulin meel kasta. Baaskiilaha BSF, dabcan waa la isku hagaajin karaa sida loo baahan yahay.
Konteynada ukunta BSF waxay ku jiri kartaa basiin, baaldiyo, gallon la isticmaalay, argagax iwm. Ukunta ukunta ee la qaado ama laga goosto budooyinka BSf ayaa markaa lagu burburinayaa weelashaas.
Kaddibna waxaa loo habeeyay rafcaan si ay uga dhigaan mid aad u habeysan sidii la filayay.
Mashiinka ukunta BSF waxaa loo samayn karaa sida fudud oo ah qoryaha, bamboo iyo qalabka kale ee qashinka. Biotong sidii weel si loogu ballaariyo qanjirada geedi socodka ka dib markii uu ukumaha uumiyo dabadeedna loo wareejiyo balaarinta biotong.
Biotong waxaa lagu sameyn karaa nidaamyo xakameyn ah sida samaynta dhul-dillaac. U diyaari 3 ilaa 4 isdabajoog.
Sidan oo kale, beeritaanka qashinka ayaa xajin kara dhulka cidhiidhiga ah ee geerashka ama deyrka guryaha gurmadka ah.
Biotong ayaa sidoo kale lagu samayn karaa qalabka sibidhka ee loo qoondeeyay sida samaynta balliyada kalluunka laakiin kaliya oo ku saabsan 30 cm ee dhererka.
20. Macmacaanka BSF iyo ukunta oo bilaash ah
Duufaanta BSF waa meel kasta oo Indonesia ah. Habka lagu bixinayo waxyaabaha ka soo hadhay kijada ku jirta weelka, jajabiyaha BSF ayaa iman doona oo ukumo ku ridaya weelasha la siiyey.
Marka laga reebo inta ka hadhay jikada waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo la isticmaali karo ilaa inta maaddooyinka lagu daro qaybta dabiiciga ah oo aysan ku jirin sunta ama ay ku jiraan sunta cayayaanka.
21. Cagaarshow Cagaaran iyo Nabadgelyo leh bey'adda
BSF waxay leedahay cod xoog leh oo celiya qolalka guriga iyo duqaynta cagaaran. Sidaa daraadeed, warbaahinta hoose ee aan diyaarinnay ma jiri doonto wax isku dhafan oo isku dhafan duqaynta guriga iyo duqoobyada cagaaran.
Tani waa mid aad u muhiim ah si beeraha nooca loo yaqaan "maggot" ay yihiin kuwo nadiif ah oo ka yimaada dukhaanta cudurka. Wax urin, badbaado iyo raaxo u leh kuwa beerta ama deegaanka ku xeeran.
22. Maggot BSF waa saaxiibka digaaga ee digaaga
Maggot-ka duulimaadka madow wuxuu si weyn u yareeyn karaa E. coli 0157: H7 iyo Salmonella enterica oo laga helay digada digaagga.
Askariga madgot ee duulimaadka u duulaya ayaa si dhakhso ah u dila wasakhda, sagaal kiimiko oo kiimiko ah oo ka yimaada nijaarro saacadaha 24.
Askariga madow wuxuu duulimaadku si deg deg ah u yareynayaa mugga iyo miisaanka qashin qubka. By habka of gononies larval waxay jebiyaan cuntada iyo abuuro kulayl, sii kordhaya uumi of compost.
Qadaro muhiim ah ayaa sidoo kale loo beddelaa dioxide kaarboon kaas oo lagu nuugo jeermisyo iyo jeermisyo isku dhafan.
Qaaxada ee nidaamka compost caadi ahaan waxay yareeyaan mugga compost by ku saabsan 50%. Oo waxay gaari kartaa 90% iyadoo la adeegsanayo habka beeraha ee BSF casriga ah ee aan lahayn Bau oo leh Yurie BSF.
Qeybinta Dhiiga BSF
Noocyadaasi waxay asal ahaan ka soo jeedaan qashinka neotropic, laakiin tobaneeyo sano ka hor waxay ku faaftay dhammaan qaaradood, oo ku dhowaad isbeddel.
BSF waxay joogaan Yurub intooda badan, oo ay ku jiraan Jasiiradda Iberian, Koonfurta Faransiiska, Talyaaniga, Croatia, Malta, Canary Islands iyo Switzerland.
BSF waxaa sidoo kale laga heli karaa Afrotropic ekozon, Ekozon Australasia, Cawska Bariiska Palaearctic, Cawska Hore, North Africa, iyo Ekozon Indomalayan.
Dumarka qaangaarka ah ee dhedigga ah waxay ukumo ukumaha uumiig ah uumiigga ukumaha 185-1.235 mar. Ukunta waxaa badanaa lagu kaydiyaa dildilaaca ama dusha sare ama kor ku xusan agabyada dabiiciga ah sida digada ama compost iyo diyaargarowga ku saabsan maalmaha 2-4.
Dirxiga cusub ee xawaarihiisu waa 0,04 inches (1 mm) oo dheer, awood u leh inuu gaaro 1 inches (27 mm) dheer iyo 0,10 ilaa 0,22 g dhamaadka wareegga xaddiga.
Marxaladda ilmagaleenka waxay socotaa maalmaha 18-22, halkaasoo marxaladda diyaarinta ay socoto maalmaha 7. Dhererka marxaladda ilmagaleenka ayaa dib loo dhigi karaa waxaana la kordhiyaa dhowr bilood gudahood heerkul hoose ama cunto la'aan.
Marxaladda koonfureed waxay ka socotaa 1 ilaa toddobaadka XNUM. Duufka qaangaarka ah wuxuu ku noolaan karaa inta u dhaxaysa 2 - 5 marka la siiyay sonkorta ama sonkorta java marka la haysto ama cabitaanka ay jecel yihiin nectar duurka.
Isku duubka qaangaarka ah wuxuu ku noolyahay kaydka dufanka ah ee la ururiyey inta lagu jiro marxaladda dhalmada
Duulimaadka BSF wuxuu leeyahay morphosis udub dhexaad u ah soo celinta jiritaanka. Metamorphosis perfect waa wareegga nolosha ama wareegga nolosha xayawaanka ee la kulma marxaladaha 4 noloshooda.
Hal wareeg nololeed BSF waxay qaadataa maalmaha 40-44. Xilliga wakhtigu wuxuu ku xiran yahay arrimaha sida heerkulka daryeelka iyo cuntada.
Duulimka BSF waa mid u gaar ah sababtoo ah wareeggeeda noloshiisa waxaa ku jira marxalado badan, oo ah wajiga 5 sida soo socota:
BSF Duufaan Waji
Marxaladda loo yaqaan 'larval'
Adult / Imago Fly Wajiga
Marxaladda duulimaadka weyn ama imago waa masraxa ka dib markii habka loo yaqaan "pupa process" uu ka soo baxo qolkiisa. Muuqaalka imago marxaladaha BSF ma cunaan oo cabbaan kaliya inta ay noolyihiin.
Dhallinyarada BSF ayaa duqsiyaya oo u soo baxa oo ka soo baxa qolofta iyo saacadaha 12 oo keliya ayaa si tartiib ah u kori doona duqsiyada dadka waaweyn.
Duufaan cusub oo cusub ayaa ka soo bixi doona weelka cocoonka ah waxayna u duuli doonaan si ay u helaan ilaha qoraxda iyo cabitaanka.
Da'da qaangaarka bsf waa mid aad u gaaban, taas oo u dhexeysa maalmaha 5-8, taasina waxay saameyn ku yeelaneysaa arrimaha ku saabsan cimilada, qoyaanka iyo cabitaanka sigaarka.
Ka dib markii si qunyar ah oo qaangaar ah BSF duugo duugaysa ama duugaya. Duufaanta BSF waxay leeyihiin awood u leh inay si firfircoon u shaqeeyaan oo kaliya waqti gaaban.
Cabitaanka khamriga ee BSF
Cabitaanka ugu wanaagsan ee BSF waa dharab subaxa iyo ubax laga soosaaray malab. In qafis xabsi ah waxaan sidoo kale siin kartaa sonkorta Java sida bedelka ah malab.
Waxaad tan sameysaa adigoo ku buufinaya dareeraha guud ahaan.
Inta lagu guda jiro mulkiilaha ama lammaanaha waalidka labka ah ayaa la socon doona haweenka. Marka la eego habka dheddigga haweenka BSF waxaa loo beddelaa heer gaar ah waxayna ku meelgaar yihiin.
Goobta duulimaadka labka ah ayaa marka hore duulaya oo gaabisaysa jirka haweeneyda, waxay ku wajahan yihiin jihada isla, laakiin dhowr ilbiriqsi ayaa markaa dib u jeeda oo ka soo horjeeda midba midka kale.
Xaaladdan oo ah heerkulka duulimaadka wuxuu noqonayaa isir muhiim ah oo ah doorka muhiimka ah waa heerkulka. Heerkulka ugu wanaagsan ee duufaanta BSF waa heerkulka 30 ° C.
Inkasta oo BSF aysan u baahnayn cunto inta uu noolyahay, haddana waa in la siiyaa cabitaan. Daaweyn adigoo cabaya cabitaanka malab ee duqsigu waxay kordhinayaan wax soo saarka ukunta.
Bixinta malab ama biyo ama biyaha sonkorta ee Javanese waxay saameyn ku yeeshaan kordhinta da'da duqsigu.
Waxaana lagu arki karaa tirada maalmaha kordhinta nolosha duulimaadka iyo tirada maalmo ee ukumaynta ukunta ee duqsiyada.
Tirada Maalmaha Dheeraadka ah ee Daadka Da'da
Maalinta 10-11 waa maalinta ugu badan ee dhimashada BSF loo siiyay malab
Maalinta 5-8 waa maalinta ugu sarreysa dhimashada BSF oo la siiyay biyo la cabbo
Tirada maalmo ee lagu dhejiyo ukunta duuli karta
Maalinta 5 waa maalinka ugu sarreeya ee dhigaya ukunta dhirta la siinayo malab
Maalinta 7 waa maalinka ugu sarreeya ee dhigaya ukunta digaagga ee la siinayo biyaha la cabbo
Waqtiga u dhexeeya 10-30 waa haweeney BSF ah si loo dhigo ukunta. Iyadoo celcelis ahaan tirada udhexeysa 546-1.505.
Qiyaasta ukunta BSF ee u dhaxaysa 16,2-18,9 mg iyo miisaanka ukumo kasta oo u dhaxeeya 0,027-0,032 mg. Waqtiga ugu sarreysa badanaaba wuxuu dhigayaa ukumaha u dhaxeeya 11.00-15.00.
Dumarka BSF waxay u duudduubaan ukumaha hal mar, waxayna dhintaan dhowr saacadood ka dib.
Dumarka BSF Dumar badan
Dareeraha haweenka ee BSF caadi ahaan waxay abuuraan ukumo badan marka la barbardhigo duqsaha dhedigga ah ee yar yar.
Awoodda ku habboon ee dalagyada BSF waxay ku dhacdaa qoyaanka udhexeeya 55-60%.
Duufaan dadka qaangaarka ah ayaa ku duubi doona iyo dibedda xNUMX ° C (24 ° F) ilaa 75 ° C (40 ° F) ama ka badan. 104% dabiiciga beerka wuxuu ku dhacaa xNUMX-99,6 ° C (27,5-37,5 ° F).
Nalalka Quartz-iodine ayaa si guul leh loogu isticmaalay si ay u kiciyaan naas-nuujinta duqsiga weyn. Xaaladaha kulaylaha, qorraxda tooska ah ee qorraxda subaxda iyo galabta ayaa kicin doona BSF si ay u wada noolaadaan una dhigaan ukumo.
Meeshii qorraxdu si aan toos ahayn u fiican tahay BSF ka hor iyo ka dib labadaba.
Qoyaan dhexdhexaad ah
Qoyaanka 70% waxaa loo tixgeliyaa heerarka ugu fiican dhammaan wareegyada noloshiisa. Substrateka looma baahna kaafiyeyaasha, laakiin substrate waxaa loo tixgeliyaa in uu u dhaqmi karo sidii qaansooriyaha qoyaanka kaas oo ka hortagaya qalajinta.
93 Heerka% heerka duulimaadka marka qoyaanka waxaa lagu hayaa 70%.
Ciidanka madow waxay u duulaan dirxiga, dadku way cuni karaan. Dareeraha waa mid wax ku ool ah oo bedelaya borotiinka, oo ku jira borotiinka 56, hodan ku leh kalsiyum iyo dhamaystirka asiidhyada amino.
Saacadaha 432, 1 oo ah ciidan madow waxay u duuli doonaan ukunta isbedelka 2,4 kg ee borotiinka, taasoo macnaheedu yahay in ka badan ukumaha 45.000 ee ukunta 1. Sidaa awgeed, waxay noqon karaan ili ah borotiinka isticmaalka dadka.
Ma soo saaraan borotiinka, laakiin badalida borotiinka aan la cunin bini-aadanku wuxuu noqonayaa cuntada la cuni karo.
Dhaqdhaqaaqa qamriga ee udgoon wuxuu urinayaa barandhada la kariyey.
BSF Egg Wajiga
Wejiga ukuntu wuxuu ku dhacaa maalmaha 2 - 4. Farqiga waqtiga ee dhacaya waxaa keena heerkulka iyo qoyaanka hareeraha jawiga ukunta.
Caadi ahaan haweenka Dumarka BSF waxay ukumaheeda ku ridaan meel qoyan iyo waxyaabo badan oo dabiici ah oo ah nooc jimicsi ah oo ah nooc jacayl u ah caruurtooda markay baaluqayaan caruurtoodu ma'aha "saboolka" iyo gaajo.
Tusaalooyinka goobaha halkaas oo ukunta BSF lagu meeleeyo waalidka BSF
Goobta qashin qubka
Marka la eego wajiga ukunta, haweeney haween ah ayaa soo saari doonta ukumo badan oo udhaxeysa ukunta 185 - 1.235 ama badanaa loo yaqaano koox.
Qaababka ukunta BSF waa oval oo leh dhererka ku saabsan 0,7mm, marka ugu horeysa ee waalidka gabadha la dhigo, ukumahani waa caddaan cad.
Ka dibna si tartiib tartiib ah u jimicsado midab huruud ah. Si loo kala sooco ukumaha ku soo boodey ama aan ahayn, habka waa in la eego ama la arko ukunta BSF.
Haddii midabku isbeddelo midabka casaanka ah (orange) iyo qaabka qandhada ukunta ma aha mid qalafsan ama mid xun.
Sidaa awgeed waxaan hubsan karnaa in ukumaha ay hirgeliyeen oo ay u jeesteen dirxiga ama maggaalada ama magacyo ama uget-uget.
Warbaahinta loogu talagalay ukunta BSF waxay noqon kartaa wax kasta oo dabiici ah sida qashinka, qashinka iyo digada.
Dirxiga BSF waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo compost ama loo tuuro qashinka xayawaanka xoolaha. Isku-darka la gooyey waxaa la siiyaa sida feedka digaaga, kalluunka, doofaarrada, qoob-ka-xayawaanka, dhuunta, duqoobyada iyo xitaa eeyaha.
Dirxiga BSF waa mid ka mid ah xayawaanka ugu wax ku oolsan ee beddelaya quudinta xayawaanka. Marka lagu daro wax soo saarka borotiinka, dirxiga duulista ayaa sidoo kale soo saara kheyraad kale oo qiimo leh oo la yidhaahdo frass (kasgot / loo isticmaalo maggot).
Kasgot waa hadhuudh iyo hadhuudh aan loo isticmaali karin bacriminta dabiiciga ah. Dirxiga BSF ka hor inta aan la gelin marxaladda qaangaarka (prepupa) ilaa lix darsi.
(Wadahadalka macluumaadkaan waxaa loo fududeynayaa sadexda marxaladood si loo caawiyo fududeynta fahamka iyo fududaynta dhaqankaaga).
Halkee marxaladda prepupa dirxiga mar dambe wax cunin, oo faaruqin calooshooda, qaybahooda afka waxay u beddelaan guntooda loo isticmaalo fuulitaanka.
Wajiga koowaad ee koowaad
Marxaladda labaad iyo koowaad
Wajiga sadexaad ee koowaad
Wajiga Instar I
Marka ugu horeysa ee marxaladda koowaad ah ee dirxiga yar ayaa si firfircoon uga gudbi doona ilaha cuntada. Wejigan koowaad ee koowaad ee dirxiga ayaa si ba'an u baahan baahiyo badan oo cunto ah sida qayb ka mid ah geedi socodka koritaanka.
Ka dib markii 1 - 2 maalmo maalmeed, marxaladda koowaad ee ugu horreysa ayaa laga sii daayaa maqaarka waxayna galaan marxaladda labaad ee xasaasiga ah.
Marxaladda Simar II
In marxalad labaad instar, dirxiga hadda waxay leeyihiin cabbir ka weyn oo ku wareegsan 4-5mm, oo leh sifooyin isku mid ah sida wajiga koowaad ee instar laakiin leeyahay af ka weyn oo ka ah marxaladda instar ugu horeysay.
Ka muuqatay qaybta hore ee cirridka kaas oo leh buro yaryar. Markaad tukatid mar kale waxay noqotaa marxaladda seddexaad ee xasaasiga ah oo noqonaysa mid muuqda.
In marxaladda sadar sadexaad, dirxiga waa u dhexeeya 15mm ama ka badan oo ku tiirsan nuujinta la bixiyo (oo la heli karo).
Marxaladda seddexaad ee wareegga ah ee dirxiga ayaa horeyba ujooga oo si firfircoon u dhaqaaqa si uu u helo meel qoyan oo laga ilaaliyo roobka iyo qorraxda tooska ah ka dibna u koro ubaxa ama cocoon.
Dammaanadda udubdhexaadka ah ee loo yaqaan 'prepupa dictation' kaas oo markaa loo adeegsado qashin-qubaha si uu is-u-goosho prepupa laftiisa.
Habka goosashada ee automatic iyadoo la siinayo weel dhererkiisu le'eg yahay oo jidka loo marayo ama wuxuu bixin karaa jaranjar kaas oo u oggolaanaya prepupa in uu ka soo baxo biotong iyo dhaco meesha loo ururiyo.
Heerkulka ugu wanaagsan ee dirxiga si dhakhso ah u kora waa 30 ° C.
Maggot-ka duullimaad ee madow wuxuu aad u xoog badan waana uu adkeyn karaa xaaladaha heerkulka badan iyo heerkul sarreeya marka loo eego gooryaanka. Askariga madow duulaya wuxuu diri karaa jiilaalka.
Oo askari madow waxay u duulayaan dirxiga haddii ay dadku aad u qulqulayaan, kulaylka xad-dhaafka ahna waxaa soo saarey jeermisyo ku jira gasacadaha qashin-qubka ama lafaha compost.
In marxaladda prepupa, dirxiga waxay leeyihiin nudaha buuxa oo sii kordhaya unugyada baaluqka ah.
Marxaladani waxay socotaa maalmaha 7, laakiin waxaa sidoo kale saameyn ku leh heerkulka meel kasta. Heerkulka wuxuu u dhexeeyaa 26-33 ° C.
In marxaladda prepupa dirxiga ee midabka jir ee dirxiga u noqdaan madow. Isbeddelada midabka ee dirxiga oo calaamad u ah dirxiga waa qaan gaar ah oo diyaar u ah inuu u soo jeesto ubaxa ama cocoon.
Dumarka Dumarka BSF ee koritaankooda waxay ku jiraan substrate ama dhexdhexaad ka badan dhirta labka ah.
Miisaanka dheeraadka ah ee dheddigga dheddigga
Iyo dirxiga haweenku miisaan badan marka la barbardhigo dirxiga labka ah. In marxaladda prepupa lafaha prepupa si dabiici ah ka baxo warbaahinta.
Raadi meel dooxada laga ilaaliyo qorraxda tooska ah iyo roobka.
Tijaabinta prepupa waxaa si sahlan looga heli karaa godadka caleemaha, godadka qoryaha, qashinka xoolaha duurjoogta ah, foornada qoryaha saliida ah iyo wixii la mid ah.
Tani waxaa la sameeyaa si looga fogaado gefaha sida digaagga, kalluunka, shimbiraha, shimbiraha, eeyda, jiirka iyo wixii la mid ah.
Wixii xayawaankaas ah (geedkaas) prepupa sida hilibka lo'da oo ah wax macaan leh oo sarreeya ee borotiinka. Diyaargarowgan nolol maalmeedka ee bulshada waxaa badanaa lagu magacaabaa miraha ama cidlo.
Haddii ay kugu adkaato helitaanka prepupa dabiiciga. Beddelka ayaa ah inaad ka soo iibsato kalluumeysatada.
Tayada diyaargarowga ma aha mid isku mid ah
Maggot waa xayawaan aan caadi aheyn, taas oo macnaheedu yahay wax cunid ilaa inta uu ku jiro qaybta dabiiciga ah.
Ku siinta cuntada ama quudinta dirxiga tan iyo markii ay ufududeyso si ay u koraan prepupa si weyn u saameeya tayada prepupa.
Intaa waxaa dheer, diyaargarowgaas ayaa loo isticmaali doonaa ujeedada ah in ay noqoto mid si loo beerayo mar labaad.
Haddii quudinta la siiyay kaliya oo ah qashinka ama digada xoolaha ama cadarka, dabcan nooca prepupa wuxuu noqon doonaa tayada hooseeya sida faleebo.
Nooca prepupa waa wax fiican haddii loo isticmaalo qalabka wax lagu nadiifiyo. Ma aha ereyada loo isticmaali doono dib-u-beerashada.
Bixinta raashinka ceeriin iyo kuwa aan qallajineynin waxay diyaarinaysaa prepupa waxyeello nafaqo ah waxaana loo isticmaali karaa inay noqoto shaqaale.
Kalluumeysatada Maggot oo aan fahmin oo siineynin qadar ah oo quudin ah oo iibiya iyada oo kuwa qashin-qubka ahi ay waxyeelleynayaan.
Dhab ahaantii tani waa sababta oo ah ma fahmin. oo kaliya oo loo jiheynayo si loo yareeyo qarashka daryeelka ilaa badeecada la iibiyo.
Laakiin kuwa idinka mid ah ee raba in ay horumariyaan oo ay beeraan BSF, laguma talinayo in la bilaabo beerashada maggotiinta adoo iibsanaya abuurka duurjoogta ah.
Sababtoo ah dhuunta aad iibsanayso mar kale waa la beeray. Beeraha Maggot oo ujeedkiisu yahay inuu iibiyo alaabada la yiraahdo "Maggot" waa inay fahmaan sida loo soo saaro xirfad ahaan.
Sababtoo ah dhab ahaan Maggot wuxuu leeyahay dabeecada "xajinta".
Waa maxay Gutka?
Gut load waa geedi socodka xayawaanka la kiciyo oo la quudiyo cunto nafaqo leh si loo siiyo nafaqooyinkaas xayawaanka kuwaas oo iyaga u gaar ah.
Ereygan waxaa inta badan loo isticmaalaa diyaarinta maggot kaas oo loo isticmaalo qashinka dib loo beerayo.
Maggots kuwaas oo ganacsi ahaan kor loogu qaaday ganacsiga xayawaanka waa in ay leeyihiin qiimo nafaqo dhamaystiran.
Marka la siinayo dirxiga raashinka tayo sare leh ka hor inta aan la gelin boodhadhka, prepupa waxay yeelan doontaa tayo wanaagsan sida boodhadhka. Ku-xigeenka.
Gut load waxaa badanaa lagu sameeyaa iyadoo la siinayo miraha, khudradda, iyo badarka ama cuntooyinka macmalka ah ee nafaqada leh.
Qaar ka mid ah alaabooyinka ganacsiga ah ayaa la heli karaa oo lagu xoojinayaa gaar ahaan qalabka guntimaha sida seddexaad M ama Magic Media Maggot.
Waxyaabaha Saddexaad M ama 3 M horayba isugu jira carbohydrates, dufan, borotiinno, fitamiinno, macdan iyo fiyuusta cuntada.
Fasalka ardayga ama qoorta, waa wejiga meesha ugu fiican ee nafaqada ah. Dhallaanka ilmaha (cocoon) ayaa miisaanka u dhexeeya 10% -15% ka culus ragga.
Waxaa lagu kaydin karaa heerkulka qolka dhowr wiig, iyo haddii aad rabto inaad kordhiso nolosha ardayga, waxaad ku kaydin kartaa heerkulka 10-16 ° C.
Sida loo kululeeyo jeexjir ama joodariga yaryar waxaa loo diyaarin karaa weel weelka warbaahinta sida buste.
Kuwa soo socda waa isbarbardhigga shanta muraayadood ee loo isticmaalo bakeetka. ie ma isticmaalaan substrate, ciid, humus ciidda, balka.
Pupa leh ciidda iyo substrate dhadhan waa ka dhakhso badan dhulka ama sida balka. Qeybta ugu dhakhsaha badan waa arday aan la siin buste (substrate)
Heerkulka, heerkulka ugu wanaagsan BSF duubo wareegga nolosha ee u dhaxaysa 8-11 maalmood iyo 29-30 ° C. Horumarinta ukumaha ugu sarreeya heerkulka sare 30 ° C.
Cunto, Qaddar iyo horumarinta ukunta duubka ayaa aad u saameeya tayada raashinka la siiyo. Qodobada nafaqada badan ee quudinta, ka weyn BSF Lalt. Ku-xigeenka. Makhaarooyinka nafaqo-darrada leh waxay ku fashici doonaan inay dillaacaan ama natiijo caadi ah waa ukun aad u yar
Iftiin, iftiin yar ayaa muhiim u ah horumarinta duqsiyada BSF. BSF waxay jecel yihiin meelo qurux badan
Warbaahinta, Warbaahinta leh nuxur ka mid ah nafaqada ayaa si toos ah saamiga ugu leh tayada qamriga. Warbaahinta ugu wanaagsan sida Saddex M (Digitaalka Saxaafadda Maggot), Keega Saliida ah (PKM).
BSF kala duwan Male iyo BSF Dumarka
Isku duubnaanta jirka haweenku waa yar tahay
Dumarka labka ninba way gaaban yihiin
Galmada caloosha 3, iyo 6 ee dheddigga
Calooshuna waa lab iyo dheddig
Dumarka malaha lab iyo dheddig lab ah
Dhibaatooyinka soo-saarka Maggot
Dhibaatada ugu weyn ee abuuridda beerashada BSF waa BAU. Ka digtoonow hababka beerista saxda ah ee saxda ah tan iyo bilowgii.
Haddii aad beerashada qoob-ka-soo-saarku uriso, tani waa dhibaato weyn. Ka sokow adiga oo aan raaxo lahayn sababtoo ah urta waxay sidoo kale ku martiqaadi kartaa yaxeeyaha iyo cayayaanka sida jiirka, duqaha cagaaran, baranbarada, masaska.
Ka sokow cayayaanka, khatarta ugu wayn ee beerashada qoob-ka-soo-saarka ayaa ah qoysas iyo dibad-baxyo deegaanka ah. Waxaa jiray beeraley badan oo maggots ah oo lagu qasbay in ay xiraan sababtoo ah urka ay sababeen beerahooda beertooda.
2. Natiijooyin yar
Dhibaatooyinka kale ee ugu weyn waa dhalidda hoose ee moosta iyo helitaan la'aanta joogtada ah.
Bedelka wareegga wax soo saarku wuxuu u baahan yahay inuu bixiyo jeermiska BSF ama ukunta oo sii wadaya.
Xalku waa in la dhiso deegaannada BSF ee dabiiciga ah sida joogtada ah ee ukunta iyadoo kalluumaysi la isticmaalayo qalab sida biotong.
Si aad u bixiso BSF ukumo ukumo waxay isticmaali kartaa qaybo ka mid ah kartoonada, caleemaha qalajiyey ee muusikada ah ama iibka boorsooyinka iibka buugaagta ama koobiyeynta.
Diyaarad askari oo madow ah ayaa si fiican u dhalin kara sanadka oo dhan cimilada kulaalayaasha ama cimilada, laakiin cimilada kale, waa loo koriyo si loo helo ukun ku jira xilliga qaboobaha.
Sidaa daraadeed waxaan joognaa Indonesia haddii aan nahay hal abuur iyo dadaal, uma baahno inaan ka walwalno dhibaatadan.
3. Doorashada Khalad ah
Ku khaldan adoo dooranaya nooca duulimaadka iyo caanaha. Qodobo badan oo lagu beeray waa caleenta cagaaran. Tani waa in isla markiiba la hagaajiyaa.
Sababtoo ah duqsiyada loo maleynayo in lagu beeray waa duulimaad madow halkii ay ka duuli lahaayeen duqsiyada cagaaran ee qaadaya cudurrada faafa.
Haddii lagugu qasbo inaad iibsato miraha, ka iibso abuurka sarajoogga sare ee BSF si natiijooyinka ay u fiicnaadaan. Soo iibso miraha sare ee caanaha ee noloshooda.
Haddii aad soo iibsato miraha gebi ahaanba natiijooyinka looma xaqiijin karo, ugu dambeynna waa inaad iibsataa oo aad dib u iibsataa.
Annagu ma naqaan Bruce Lee
Ha iibsan ukumaha BSF ee lagu iibiyo garaam. Waxaad ubaahan tahay inaad ogaato ukumaha BSF ee iibiya garaam kasta oo micnaheedu yahay inaad iibsanayso ukunta jaban sababtoo ah "waa la xoqay" meeshii laga soo qaaday.
Ukunta BSF waa la burburin doonaa. Sidaa darteed waxaad iibsanaysaa ukunta jaban mana dabooli doonin.
Ma aha in la sheego marka la isku darayo ukumahaas oo aan si taxadar leh u dillaacin taas oo keenta in ukumaha BSF jabiyo oo uusan dabooli doonin.
Ganacsiga ukumaha bsf kerok wuxuu u muuqdaa mid khibrad badan ka badan halyeeyga Bruce Lee oo xoqin kara ukunta iyada oo aan wax jabin.
Xalka ayaa ah in la iibsado ukun BSF ah "koox" kaas oo wali si buuxda u cakiran sida booska duulimaadka duulimaadkooda ay dhigeen ukumaheeda.
Tani waa si loo hubiyo in ukumadu ay noqoto mid aan joogto ahayn oo aan la jebin si ukunta oo dhan loo iibsado halkii ukunta jaban.
4. Cilad khalad ah
Miyuu yahay codsiga quudinta saxda ah ee lagu beegsanayo badbaadinta 83%.
Si taas loo gaaro, waxaan u baahannahay inaan barano sida loo xalliyo caanaha loo yaqaan 'kalluunka' iyo kalluunka digaaga ee loo yaqaan 'processed formula'.
5. Maggots Marketing Confused
Xaggee baad dooneysaa inaad iibiso qashinka "maggot" -ka markaad cuntadaada naftaada u qabato. Halkee baad dooneysaa inaad iibiso qamriga?
Xalka dhibaatadani waa mid sahlan, waxaad u baahan tahay inaad kallifto ganacsiga kalluunka ama digaaga.
Laakiin haddii aadan awoodin sababta oo ah sababo gaar ah, markaa waa inaad bilowdaa inaad ka fekerto meesha laga gado qashinka.
Xalku waa sahlan yahay, iibinta jeexjeexaaga Yurie BSF, hadda waxaad ka heshay maggot qiimo ah RP7.000 halkii kg.
Qiimahani aad ayuu uga sarreeyaa suuqyada oo kaliya qiyaastii Rp4.000-Rp5.000 halkii kg.
Yurie BSF waxay iibineysaa qiimo sareysa qashinkaaga sababtoo ah waxaan u baahannahay in lagu baari lahaa xayawaanka xoolaha oo loo qaybiyo in ka badan magaalooyinka 99 ee Indonesia.
Haddii aad xiiseyneyso inaad si toos ah ugu shaqeysid beerta kuugu dhow mggot ee magaaladaada, waxaad ka eegi kartaa cinwaanka boggan ama toos ugu wac Ms. Yurie on 0812-2105-2808.
6. Aan horumarin
Horumarinta ganacsiga maggaalada. Dabcan, haddii aad marka hore waxaad ka fekereysaa soo saarida qashinka.
Bilowga, waxay ujeeddadeedu tahay inuu yareeyo qiimaha xoolaha. Waqtiga uu socdo, xirfadahaaga ayaa kordhi doona sidoo kale dalagyo badan oo caleenta ah ayaa la goosan doonaa.
Dadka qaarkood, dabcan, waxay u baahan yihiin caawimo si ay u sii wadaan koritaanka. Sidaa daraadeed Yurie BSF wuxuu la yimaadaa barnaamij gargaar siinta dhammaan saaxiibada Yurie BSF ee Rp100.000.000 qofkasta iyo dabcan waafaqsan baahida ganacsiga.
Shuruudda ah in la helo deeq-lacageedkan waa inaad adigu si tartiib ah u iibisid ciriiriga aad ku gasho Yurie BSF. Deeqdan waa in lagu soo celiyaa adigoo u diraya qashinkaaga maggaalada Yurie BSF.
Qadarka lacagta dib u celinta maaha wax dan ah. Ma aqbalno RIBA. Wax kasta oo ah qiimaha gargaarka aan bixino, ma jiraan wax lacag dhimis ah.
Kadibna waxaad sidoo kale qiimahaas ku bixisaa Maggot.
7. Loogu talagalay
Kormeeraha goobta ka shaqeeya ee hubiya in aad beerashada dalagyada beeraha ku guulaysato. Hagidda goobta waa mid aad u muhiim ah maxaa yeelay dhibaatooyinka aad la kulantid maalin walba waxay la mid yihiin "isku mid" dhibaatooyinka beeralayda meelo kale.
Tani waa meesha barnaamijka DUTA YURIE BSF ay ku ciyaaraan beertaada. Sii hagitaan toos ah si waafaqsan xaaladda iyo xaaladaha.
Iyada oo barnaamijkan safiirka Yuri BSF, marnaba keligaa ma noqon doontid. WAXA LAGA HELI KARAA WAXQABADAYAASHA adoo qaadanaya casharro badan oo aan ka mahadnaqno si aan u caawino dadka kale markaas guusha waa inay timaaddo.
8. Ma jirto damaanad qaad
Waxa aan ula jeedno waa hogaaminta illaa iyo inta uu dalxiisku ku guuleysto inuu dhab ahaantii ku guulaysto.
Kumanaan qof oo ka mid ah saaxiibada Yurie BSF tan iyo markii ay ogaadeen 2007 ayaa weli hoos jooga Yurie BSF. MID KA MUUJINAYO LIFAAQYADA KALA DUWAN.
Haa maya, mabda'aagu waa mid isku wada mid ah, haddii saaxiibka ugu wanaagsan ee Yurie uu ku guuleysto markaas natiijooyinka maggaalada waxaa lagu iibin doonaa Yurie BSF. Waxay ka dhigan tahay inaan ubaahanahay mid kale.
9. Suuqa daroogada
Sidee ayaad u siin kartaa xayawaanka xayawaanka iyo ka qeyb qaadashada suuqa qaranka? 2019 baahida xayawaanka xoolaha ayaa lagu qiyaasay inay ka badan tahay 20-21 million tan oo xayawaan ah. Fursad ganacsi oo faa'iido badan leh.
Iskaashatada Maggaalka Indore ee Indonesian waxaa iska leh Ummadda Indonesia, oo ah shir rasmi ah oo lagu iibsado iibka iyo iibinta iyo horumarinta ganacsiga.
Maggot iyo Earthworm
Beeralayda duurjoogta ah waxay badanaa helaan dirxiga meesha ay ka soo baxaan Gooryaanka. Larvae ayaa ah kuwa ugu fiican ee qashinka "nafaqo leh" qashin ku noqda xayawaanka xoolaha.
Goolashu waxay ku fiicanyihiin in ay badalaan walxaha sarifka sare (waraaqaha, kartoonada, caleemaha, alaabada dhirta marka laga reebo qoryaha) oo wax lagu beddelo ciidda aad u wanaagsan.
Earthworms waxay si fiican u koraan on haraaga soo saaro dirxiga duulimaadka, laakiin dareeraha macdanta leh waxaa ku jira enzymes waxayna u muuqdaan inay yihiin kuwo aad u yaryar oo haraaga.
Baahiyo kala duwan
Hawlgabka Larval wuxuu hayn karaa heerkulka hareeraha 37 ° C (100 ° F), halka dirxiga loo baahan yahay heerkul qaboojiye.
Inta badan dadaallada lagu kordhinayo tirada badan ee dirxiga leh ee goosgooska ku jira isla weelkii, isku marna way ku guuldareysteen.
Gooryaanku waxay ku noolaan karaan qashin qubka marka ay hooseyso carrada. Gobolladu waxay ku noolaan karaan tuubbo qashin ah marka tiro badan oo dirxi ah aysan jirin.
Goolasha ayaa lagu dari karaa haddii dadku ay yaraadaan (jiilaalka) iyo gooryaanka ayaa lagu karkari karaa qashinka qashinka inta eey sugayaan ugxan la'aanta ciidda madow.
Sida quudinta, dirxiga BSF looma yaqaano marti-qaadayaal dhexdhexaad ah oo dirxi ah oo hargab doofaareed ah, kaas oo kufilaya shimbiraha, halka gooryaanka gaduudan ay marti u yihiin xoolo badan.
BSF Cudurrada Maggot
Galbeedka Afrika, Dirhinus giffardii waxaa laga helay sida parasitoid oo ka timid H. illucens iyo hoos u dhaca wax soo saarka ukunta.
Taas oo keenta hoos u dhigida saamiyada illaa 72%. Nasiib-darradaas waxaa qaadaya fiilooyin iyo tallaabooyin taxadar leh in la qaado si loo ilaaliyo aagga ballaaran ee xayiraadda oo ka yimaad weerarada bini-aadamka.
Sida loo soo saaro Maggot
Waxaa jira siyaabo badan oo loo soo saaro qamriga. Warbaahinta kala duwan ayaa loo isticmaali karaa si loo soo saaro maggaalada sida qashinka, qashinka iyo digada.
Wax kasta oo warbaahin loo isticmaalo, dooro warbaahinta in ay fududahay inaad hesho iyo "ku dhawaad ​​bilaash".
Laguma talinayo in la isticmaalo warbaahinta adoo iibsanaya sida isticmaalka macaanka.
Kobcinayaan qashinka warshadaha bran oo ay weheliso tayada qaaliga ah ee tayada leh ayaa sidoo kale hooseysa. Sababtoo ah waxyaabaha nafaqo leh ee bran waa mid hooseeya.
Noocyada Warbaahinta Cunugaada ee Maggot
Kobcin Warbaahinta Xayawaanka Xoolaha
Soo Saarista Warbaahinta Qashinka
Horumarinta Maggaalada Xoolaha
Mid ka mid ah habka loo beero dhoobada waa iyada oo la isticmaalayo digada xoolaha.
Beeraha digriiga ah ee lagu beero digirta xooluhu waa hab fiican oo loo soo saari karo qadar badan oo maggotar ah qiimo yar.
Waa maxay nooca lo'da xoolaha loo isticmaali karo mid dhexdhexaad ah oo lagu beerayo qoryaha.
Mabda 'ahaan, daaweynta xoolaha oo idil waxaa loo isticmaali karaa warbaahin beereed. Sidaa darteed ma jirto sabab loo iibsado warshad beerista subgad.
Tusaalooyinka cayayaanka ee warshadaha beerista
Beeraha Maggotiga ee warbaahinta ka yimaada qashinka tofu qashinka, ama qashinka cagaarka ayaa aad loogu talinayaa sababtoo ah marka lagu daro soo saarka tayada tayada leh.
Iyadoo sidoo kale xal u helidda wasakheynta qashinka tofu ee lagu tuurayo webiga.
Sidoo kale qashinka saliidda ah ee aan la isticmaalin oo lagu tuuray aagga saliidda. Inkastoo dhoobada saliida leh ay aad u fiican tahay mid dhexdhexaad ah.
Tusaalooyinka qashinka loogu talagalay warbaahinta beerista
Qashinka dabiiciga ah waa dhibaatada deegaanka ee hadda taagan, oo waliba meel kasta ujeeda. Waxay noqon kartaa mid dhexdhexaad ah si loo beero.
Beeraha wax lagu tumo ee warshadaha qashinka ah ayaa aad loogu talinayaa sababtoo ah natiijooyinku way wanaagsan yihiin oo aanad rabin inay xaliyaan dhibaatooyinka qashinka.
Dhibaatada qashinka waa dhibaato caalami ah, ma aha oo kaliya Indonesia.
Waxay noqoneysaa wax aad ufiican haddii aan nahay qaybo yaryar si aan u xallino dhibaatadan qashinka ah adoo isticmaalaya qashinkan si ay warbaahinta ugu isticmaalaan warshadaynta.
Maaddooyinka Waaweyn ee Maggot
In beerista of maggot ugu yaraan waxaan soo saari doonaa walxaha dibadda ee foomka of
Maggot iyo Hawlgal
Bacriminta Noocyada Biyaha
KasGot (horay maggot) ayaa ah mid yar (sida ciidga) wasaqda laga soo bilaabo maggot xajmiga cadhada dabaysha. KasGot waxay ka timaaddaa quudasho dabiici ah oo la cuno qamriga oo lagu tuuro malawadka.
Nidaamkan waxaa loo yaqaan 'vermicomposting'. Tayada sariirta ayaa aad ugu tiirsan qaabka dayactirka qiiqa. Kasgot kuma tiirsanaan nooca walxaha dabiiciga ah ee ay u isticmaalayso.
Kasgot wuxuu ka kooban yahay macro iyo nafaqooyin yaryar iyo waliba fitamiino. Kasgot waa mid aad u wanaagsan si kor loogu qaado nafaqooyinka ciidda, koritaanka iyo soosaarka dhirta miraha iyo caleemaha.
Bacriminta Kasgot waxay ka kooban yahiin nuugaan kaas oo u shaqeeya kicinta koritaanka xididdada dhirta. Tani waa warka wanaagsan ee beeraleyda sababtoo ah waxaa loo xaqiijiyay in ay wax ku ool u ah hagaajinta tayada wax soo saarka dhirta caleen iyo dhir.
Kasgot ayaa hodan ku ah qaybaha Hara
Kasgot-ka oo laga soo saaro geedi socodka dheef-shiid kiimikaadka ee jejebiska jirka ama wax-soosaarka macdanta ayaa aad u hodan ku ah nafaqooyinka loo baahan yahay bacriminta ciidda.
Kasgot waxa ku jira nafaqooyin dhamaystiran (kiimiko iyo maadada yaryar). Geedi socodka kasgot, waxa uu laba jeer ka hoos maray geedi-socodkii kala-jajabinta ee arrinka organic.
Marka hore, habka muhiimka ah ee bakteeriyada ka hor inta aanad cunin qajaar. Tan labaad, geedi socodka ayaa iska leh, taas oo ah marka arrin baddan ay ku jirto caloosha.
Kaddib marka la mariyo qallafsan iyada oo loo marayo hababka dheef-shiid kiimikaadka. Sidaa daraadeed, maggot waxaa loo yaqaana sida bio-ga oo la gooyo.
Qalabka kiimikada ee kareemka ayaa diyaar u ah in lagu nuugo dhirta iyo cassava kaas oo ku jira microbes iyo kobcinta dhirta kobcinta hoormoonka, si ay u caawin karaan koritaanka dhirta si degdeg ah.
Tirada badan ee microbes ee falalka kasoobaxa si loo dedejiyo sii deynta nafaqooyinka foomamka loo baahan yahay by dhirta.
Isbarbardhigga N, P, K POC KasGot (Isticmaal Maggot)
2 Kursi 1,38 4,23 1,22
3 Digada lo'da 0,96 0,68 1,68
4 Horse digada 0,49 0,73 0,83
5 Digada Digaagga 2,72 6,32 2,03
6 Xayawaanka digaagga 0,84 1,81 0,42
7 Dufanka ariga 0,61 0,31 0,18
8 Digada doofaarka 1,24 1,83 0,74
Mawduucyada Nafaqada Casgot Organic Bacriminta
Qodobada nafaqada ee qamriga ah waxay ku xiran tahay hadba quudinta cunuga la siiyo.
Kala duwanaansho kala duwan ee quudinta, ayaa ka duwan kala duwanaanta qaybaha nafaqada ee kasgot. Laakiin guud ahaan nuxurka nafaqada ee kasgot waa sida soo socota:
Nitrogar (N) 0,63%
41,23% iyo awooda biyaha
Faa'iidooyinka Kufsiga Kasgot
Waa raqiis sababta oo ah maaddooyinka ka samaysan bacriminta kasgot waa badeeco dabiici ah oo nagu wareegsan.
Bacrimin cashmere ma waxyeelo ciidda sababtoo ah waxay ka madax banaan kiimikooyinka. Tani waxay abuuraysaa bacriminta kareemada si joogto ah oo aan u keenin saameyn taban oo xun ee carrada ama dhirta.
Khasnadda Burburinta Kasgot
Waxtarka leh ee dhirta ma aha sida ugu dhakhsaha badan sida Bacriminta inorganic. Sababtoo ah bacriminta cassava ayaa dabiici ah.
Wuxuu ka caawiyaa koritaanka dhirta iyo koritaanka dhirta dhirta, khudaarta iyo miraha. Waxay ka caawisaa hagaajinta muuqaalka dhirta si ay u noqoto mid aad u sareysa.
Midabka ubaxa, maadada iyo jimicsiga ayaa ka fiican. Kasgot waa mid aad u fiican sida isku dhafka warbaahinta sii kordhaysa ee xannaanada.
Waxay ka kooban tahay hoormoon si loo hagaajiyo guryaha jidhka, kiimikada iyo bayoolojiga. Ammaan ah in la isticmaalo muddada fog sababtoo ah iyada oo aan kiimikooyin lahayn.
Qaadashada Isticmaalka Bacriminta Kasgot
Bacriminta Kasgot ee dharka 1kg oo lagu qasi karo ciidda 3kg, halka dhul ballaaran oo 6-10 kg kasso kasta 10m2
Cabbirta maskaxdu waxay ku xiran tahay nooca dhirta iyo heerka bacriminta ee ciidda in la bacrimiyo.
Biyaha Liquid Maggot Biyaha Biyaha
Faa'iidada bacriminta bacriminta dabiiciga ah (POC) waa in uu leeyahay nitrogen badan, fosfooraska, potassium iyo content biyaha, waxaa ku jira kiciyaasha kobcitaanka waxayna ka hortagi kartaa imaatinka cayayaanka dhirta kala duwan.
Dabeecadda iyo sifooyinka bacriminta dabiiciga ah
Maggot bacriminta dabiiciga ah waa in lagu daraa. Sababtoo ah kasgot waxaa lagu kaydin doonaa waqti dheer warbaahinta, isticmaal shukumaan adag.
Inkasta oo nafaqada bacriminta bacriminta bacriminta dabiiciga ahi ay aad ugu nugul tahay nabaad guurka iyo uumiga.
Laakiin waxaa jira faa'iidooyin kala duwan marka la isticmaalayo Magacot POC kaas oo sahlan in lagu dheefsho caleemo iyo geedo midho leh waxayna u adeegtaa sidii kiciye loogu talagalay miraha iyo koritaanka abuurka.
Gaar ahaan marka caleemaha iyo miraha ay bilaabaan inay Gagaashaan. Maggot POC waa uu wanaagsan yahay maxaa yeelay waxaa si toos ah loogu nuugi karaa stomata ama indhaha.
Bixinta POC Maggot waa in ay fiirsato qiyaasta daawada si aanay u dhaafin oo u keenin dhimasho dhirta.
Dhirta celcelis ahaan waxay u nuugaan nafaqooyinka aan ka badnayn 2% maalin kasta.
Qiyaasta isticmaalka Poc Maggot
Ku dar POC biyo nadiif ah. Ka dib marka la isku qaso buufinta biyaha cusub, feejignaanta maaha wax ka badan 2% ama Liin kasta oo 1 oo ah MOC santuuqa oo lagu qasay xitaa litir biyo ah.
Isku buufin inta lagu jiro isbeddelka isbeddelka laga bilaabo daaqsinka illaa dhalashada oo soo saara miro, abuur ama digriiga.
Jadwalka maamulka masaajidka POC hal mar toddobaadkiiba inta lagu jiro xilliga qalalan. Marka xilli ciyaareedku bilowdo, ku buufin 3 kasta hal mar maalintii, sababtoo ah POC waxaa lagu baabi'iyaa biyo roob.
Qadarka MOC waa in lagu hagaajiyaa nooca warshadda si loo siiyo POC maggot.
Xididada qaabka loo yaqaan prepupa ama dirxiga waa inay ahaato mid hore loo mariyo diyaar garowyo kala duwan.
Tan marka lagu daro kordhinta waxsoosaarka ayaa sidoo kale lagu kaydin karaa wakhti dheer. Iyo marka loo baahdo.
Quudinta Caanaha ee Maggot
Maggot ma loo isticmaali karaa quudinta xayawaanka? Mid ka mid ah nafaqooyinka ku jira macgotku waa borotiin,
Iyo borotiinkan waxaa looga baahan yahay dhammaan xoolaha iyo xitaa aadanaha. Markaa xayawaanka waxa la siin karaa xayawaan. Jawaabtu waa dhammaan xoolaha u baahan protein.
Waa kaliya in heerarka cuntooyinka ay u baahan yihiin xayawaan kasta ay ka duwan yihiin. Sidaa daraadeed xalku waa in la dhameeystiro dhirbaaxo diyaargarawyo kala duwan marka hore.
Qiyaasaha borotiinka ayaa lagu xakameynayaa baahida xoolaha.
Maggot wuxuu u fiican yahay shimbir feedh
Shimbiraha Chirping Cucak Swamp
Shimbir Shimbir Shimbir ah
Maggot wuxuu u fiican yahay digaaga bakteeriga Bangkok
Wido Chicken ama Jalak
Maggot Wanaagsan Diyaarsanaanta Cuntada Dabiiciga ah
Digaaga Gray Forest
Digaagga Red Forest
Sri Lanka Digaag
Digaag Cocow (Silkie Hen)
Plymouth Rock Diga
Digaag ama Poland Poles
Maggot Wanaagsan ee loogu talagalay Quudinta Digaaga Digaaga
Digaag balsi ah
Muuqaal wanaagsan oo loogu talagalay Quudinta Cunnoolojiga
Dufanka Masar Fayoumi
Diyaargarowga Digaagga ee Xoriyada
Dufanka weyn ee digaagga
Chicken Turken (qashinka qaawan)
Maggot wuxuu u fiican yahay digaag digaag
Digaag Buff Orpington
Digaagga dhididka ah
Rhode Island Digaag cas
Maggot Ku Fiican Quudinta Quudinta
Xayawaanka Dumbo Catfish
Qaybta Kalkaaliyaha ah
Xayawaanka Sangkuriang Xoolaha
Maggot wuxuu u fiican yahay tilapia
Cunnooyinka Wanaagsan ee Cunto Cork
Maggot Wanaagsan Diyaargarow Cunnadeed
Magelang Cagaarka Duck Local
Tegal Cagaarka Duck Local
Tiktok Duck Duck
Mojosari dheddig nuugay
Buff Duck Duck Duck
Cirebon Duck ama Rambon
Maggot Wanaagsan ee Quudin Dheeraad ah
Maggot Ku Fiican Cunnadiisa Cuntada Arowana
Maggot Ku Fiican Cunto Qui
Ma dooneysaa inaad Barato Tababarka
Ma ku toosi kartaa Laan?
Hubi 99 Goobta Xeebta
Yurie BSF - Kobcinta Qodobka Koowaad ee Dunida ee Qaxwaha
Tababar Tababar Loogu Taaban karo Maggot
Khariidadda bogga - Qorshaha degaanka Yurie BSF
© 2000-2018 FreshBooks | Wac lacag la'aan ah: 0812 - 2105 - 2808